DEG DEG: Xildhibaano lala xiriirinayo jabhadda ka dillaacday Awdal oo la xiray Xiisad culus oo ka taagan.. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA DEG DEG: Xildhibaano lala xiriirinayo jabhadda ka dillaacday Awdal oo la xiray...
DEG DEG: Xildhibaano lala xiriirinayo jabhadda ka dillaacday Awdal oo la xiray Xiisad culus oo ka taagan..
Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama.
Ciidamada Booliska ee magaalada Boorama ayaa goordhoweyd xabsiga dhigay saddexdaa xildhibaan, xili ay ku sugnaayen Hotel-ka Raysa oo kamid ah huteelada ugu waaweyn magaalada Boorama.
Sida ay Caasimadatimes ogaatay xildhibaanadan ayaa waxa si qasab ah lagaga xiray hutelkii ay ku sugnaayen, iyadoona waaran qabasho loo sidan, isla markaana ah xildhibaano xasaanad buuxda uu siiyey dastuurku.
Xildhibaanada oo goordhoweyd xabsiga dhexe ee magaalada Boorama loo taxaabay ayaa waxay kala yihiin: Guddoomiye kuxigeenkii hore ee degmada, Xildhibaan Maxamed Muxumed Faarax Dheerayste, Xildhibaan Mustafe Xasan Labo-qaydle iyo Xildhibaan Mustafe Indhosheed.
Xildhibaanadan ayaa waxa loo xiray arrimo la xidhiidha Jabhad dhowaan ka dilaacday deegaanada Dilla, iyadoona halkaasi ka wada dad urursi, isla markaana lagu tobabaro deegaanadaasi oo ah bariga gobolka Awdal, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen qaar kamid ah ehelada Xildhibaanada la xiray.
Caasiamdatimes oo isku dayday inay wax ka weydiiso xariga xildhibaanadan Taliska ciidamada booliska gobolka iyo ka degmada Boorama, ayeysan u suurto-gelin kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonadooda gacanta.
Dhinaca kalena, Caaasiamdatimes ayaa labo maalin ka hor baahisay xogta Jabhadaasi ka abuurmatay deegaanadaasi hoos yimaada gobolka Awdal iyo dhaq-dhaqaqyada ay ka wadaan, kuwaasi oo mudooyinkii u dambeeyayna waday dar-dar gelin iyo u diyaar garow dagaal ka dhana xukuumada Muuse Biixi. Halka ka aqriso xogtaas.
Sida ay Caasimada Online xogta ku helaysay Jabhadaasi ayaa waxa ay daba socotay Jabhad kale oo hore uga jirtay gobolka Awdal, taasi oo uu hogaamin jirey Suldaan Wabar, midaasi oo iyaduna dib u soo rogaal celisay sida ay noo xaqiijiyeen dad lagu kalsoonyahay.
Previous articleXOG Culus:Malaayiin dollar oo Ku soo wajahan Muqdisho iyo dowlado carbeed oo qarshe kaleh.
Next article“Kooxda Aaran-Jaan waa iskaashatada shaydaanka” – Gaas oo ka sheekeeyey wixii kala qabsaday Faroole
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo khilaaf koodi sii xoogeystey cabsina laga qabo...
Axmed Madoobe Oo si adag Oga Hadley Dilkii loo geystay Suldaan...